Maitiro ekumisikidza iyo artwork yeedu iTunes maalbum se screensavers | Ndinobva mac
Kana zvasvika pakushandisa zvishandiso zvedu, macOS inoisa kwatinayo nhamba hombe yezvishandiso, iyo yatinogona kugadzirisa mashandiro ekopi yedu ye macOS kune zvatinoda. Chimwe chezvinhu isu chatingade kuchinja kazhinji ndiwo mapikicha emidziyo yedu, kushandisa mashandisirwo anochinja otomatiki mufananidzo zuva nezuva.
Chimwe chezvinhu zvinonakidza zvekugadzirisa izvo macOS inotipa, tinozviwana mumasevha ekuvhara, kunyanya kana tisingade kushandisa sarudzo iyo inotibvumidza kudzima iyo skrini kuitira kudzikisira kushandiswa kwesimba uye nguva iyo yedu screen iri kuvhura. Iyi sarudzo inoshanda kana tikasasiya komputa tisina kushandisa kwenguva yakareba, semuenzaniso zvinogona kuitika muzvitoro.
macOS, natively inotipa iwo akateedzana eescreensavers ayo anogona kuvhara zvakawanda zvezvatinoda, asi kwete zvese. Zvekunakidzwa, mavara. Pakati pescreensavers dzakasiyana dzainotipa, isu tinayo yatinotendera shandisa mifananidzo kubva kune ese maalbum uye discs yatakachengeta muTunes semasikirini emadziro.
Mifananidzo kubva ku iTunes discs se screensavers
Kusarudza ino Wallpaper, isu tinofanirwa kuenda kuSystem Preferences uye sarudza Desktop uye Screensaver.
Mukati mezvakasiyana screensavers izvo macOS inotipa isu natively, isu tinosarudza Kubva iTunes.
Kana ukasarudzwa, kuongorora kwekuti mifananidzo icharatidzwa sei inoratidzwa mukoramu yekurudyi.
Kana isu tisingade iyo default fomati, tinogona kudzvanya pane screensaver sarudzo uye sarudza mitsara mangani yatinoda kuoneka nemifananidzo pamwe chete nenguva yekumirira iyo mifananidzo yemadhisiki kana maalbham atakachengeta mu iTunes anoratidzwa.
Kana isu tisina chero rwiyo rwakachengetwa muTunes, iko kunyorera kuchatiyeuchidza, kunyangwe kuchizotisiya isu tisiye screensaver iyi yakasarudzwa kuitira kuti tikazobatanidza izvi zvemukati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuisa mifananidzo yeedu iTunes maalbum sesa Screensavers
Kuziva sei pawakagadzira yako Apple ID